घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू एन्टोनियो कन्ट्री बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक फुटबल प्रबन्धक को पूरा कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा प्रसिद्ध हो; 'यो धर्म पिता'। हाम्रो एन्टोनियो कोन्टे बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
सफल इटालियन प्रबन्धकको विश्लेषणमा प्रख्यात, पारिवारिक जीवन र धेरै बन्द र ओन-पिचको बारेमा थोरै ज्ञात तथ्यहरू अघि उनको जीवन कहानी समावेश छ।
कुनै श doubt्का बिना, एन्टोनियो कोन्टे एक खेलको जीतको अनियन्त्रित इच्छाको साथ एक उस्तारो हो। जो उहाँलाई राम्ररी चिन्दैनन् उनीहरू आफू मुडी छ भन्ने सोच्छन्, तर ऊ राम्रो मान्छे हो र फुटबलमा सास फेर्ने एक उदाहरणीय समर्थक हो।
एन्टोनियो कोन्टे बाल्यकाल कहानी - पहिलो जीवन र परिवार पृष्ठभूमि:
एन्टोनियो कोन्टेको जन्म लेक्स, दक्षिणी इटालीमा July१ जुलाई १ 31। On मा भएको थियो। उनको बुबा कोसिमिनो कोन्टे, एक फुटबल कोच र आमा आडा ब्रीमो, पूर्णकालिक घरकी पत्नी।
कोसिमिनो र एडाले उनलाई र उनका भाइहरू जियानलुका र डानिएललाई धेरै कडा नियमहरू लिएर आए।
त्यतिखेरको जस्तो सामान्यले पनि एन्टोनियोले आफ्नो खाली समय सडकमा खेल्थे र कसको साथी बन्नुपर्ला र कोसँग टाढा बस्नु पर्छ भनेर छिटो सिक्थ्यो। जे भए पनि, कहिलेकाँही, एक fisticuffs अपरिहार्य थियो।
भर्खरै साक्षात्कारमा उनले यसो भने;
'सडक कुनै समय हाम्रो फुटबल पिच, र हाम्रो टेनिस कोर्ट पनि थियो ... यो सबै कुरा हो! जहिले पनि केही फरक गर्न हामी फुटबलको लागि फुटबल मैदान सिर्जना गर्ने नाममा टारामाकमा सेतो चाक लाइन खान्छौं। '
एन्टोनियो कोन्टे शिक्षा:
फुटबल कोचको बावजुद एन्थोनियोका बुबाले जहिले पनि अध्ययन आफ्नो छोराको लागि पहिलो हुनु पर्छ भनेर भने। उसले उसको लागि नियम र सीमाहरू बनायो।
आरामदायी अभिभावक भएको र उनीहरूको साथी झैं व्यवहार गर्ने, कोसिमिनो कोन्टेले स्पष्ट रूपमा उनको छोरालाई बताए कि उनीबाट के अपेक्षा गरिन्छ र के नियमहरु उल्लंघन गरेकोमा सजाय के हुन्छ।
एन्टोनियो कोन्टे र फादर (Cosimino Conte)।
स्कूलमा उनका शिक्षकहरूले प्राय: एन्टोनियोलाई आफ्ना सहपाठीहरूका लागि राम्रो उदाहरणको रूपमा राख्थे र फुटबलको लागि धेरै समय खर्च गरे पनि एन्टोनियो अझै पनि उनको कक्षाका सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थीहरूमध्ये एक थिए।
'हामी पछाडि साँचो मास्टर पाउन हामी भाग्यशाली थियौं, मेरो बुबा फुटबल सिकाउनमा राम्रो हुनुहुन्थ्यो। शिक्षामा मलाई डो guide्याउन पनि उहाँसँग बौद्धिक ज्ञान थियो। उहाँ मलाई केटाबाट मान्छेमा बदल्न जिम्मेवार हुनुहुन्थ्यो '।
एन्टोनियो कोन्टे जीवनी तथ्य- आमा बुबा संग सम्बन्ध।
थियो Juventina Lecce, शौकिया टोलीले आफ्नो बुबालाई प्रशिक्षित र नेतृत्व गरे, जसले एन्टोनियोलाई उनीहरूको फुटबल फुटाउनुभयो। तिनको आमाबाबुसँगको तिनको बलियो सम्बन्ध उनको छोरालाई महानतामा उपलब्ध गराउने, पोषण गर्ने र मार्गदर्शन गर्ने ढाँचामा निर्माण गरिएको थियो।
एन्टोनियो कोन्टेको आमाबुवासँगको सम्बन्ध।
एन्टोनियो कोन्टे प्रारम्भिक फुटबल करियर:
कणले आफ्नो गृहनगर क्लबको युवा समुहको साथ आफ्नो क्यारियर सुरू गरे यूएस लेक्से र उनको बनाइयो सेरी ए6अप्रिल 1986 मा पहिलो टीमको साथ, 16 उमेर, एक 1-1 को विरुद्धमा आकर्षित ओस्लो.
प्रबन्धक अन्तर्गत कार्लो मेजोनोन, उनी टोलीको लागि एक आधारभूत खेलाडी बने। 1987 मा उनले आफ्नो टिबियालाई खारेज गरे, क्यारियर-अन्त्य चोटको खतरालाई दौडिदिए।
गम्भीर चोटपटकबाट निको भएपछि, आफ्नो बायाँ खुट्टामा टिब्या भाँचिएको कारण उसको पेसामा लागी जोखिम उठाउँदै, उहाँ १ 1988 1989-XNUMX -१XNUMX season season सत्रमा ठूलो संकल्पका साथ पिचमा फर्कनुभयो।
कोन्टेको पहिलो गोल लेसेको साथ र सेरी एमा नेपोलिको बिरूद्ध थियो। कोन्टेले years बर्षको रातो र पहेंलो जर्सी लगाई, matches matches खेलहरू खेल्दै र लेसेको लागि १ गोल ​​गर्दै।
एन्टोनियो कोन्ते जुभेंटस क्यारियर:
एन्टोनियो कोन्टे १ 19917१ को गर्मी मा ट्युरिन-आधारित क्लबले billion अरब लियरमा खरिद गरेको थियो जुन आजको million मिलियन पाउन्ड बराबर छ। उनले क्लबमा पुगे पछि चाँडै अनुकूल हुने क्षमता देखायो।
जुभको लागि उनको डेब्यू १ November नोभेम्बरमा टोरिनोसँग डर्बीको क्रममा आएको थियो, जब उनले टोटा शिलासीलाई प्रतिस्थापित गरे।
दुई सत्रको जादूको समयमा, उनी जुभका लागि बिन्दु मानिस बने, बिभिन्न भूमिका खेले, च्याम्पियनशिप खेलमा goals गोल र यूईएफए कप खेलमा matches गोल गरे।
उसको टोलीले १ 1992- ०-93 सत्रमा यूईएफए कप जित्यो। २२ मे १ 22 1996 On मा, एजेक्स बिरूद्ध च्याम्पियन्स लिग फाइनलको क्रममा, उनी एडगर स्टीभन डेभिडसँगको भिडन्तमा घाइते भए र उनको ठाउँमा राख्नुपरेको थियो।
खेल अतिरिक्त १ – १ को बराबरीमा समाप्त भयो, पेनल्टी शुट आउटलाई जबरजस्ती गरे, जुन जुभेन्टसले –-२ ले जित्यो। एन्टोनिओ कोन्टे त्यही वर्ष (१ 1 1)) जुभेन्टसका कप्तान बने जब राभेनेली र भिआलीले क्लब छोडे।
एन्टोनियो कोन्ते २०० football मा जुभेन्टसको साथ पेशेवर फुटबलबाट निवृत्त भए। उनले १ 2004 बर्ष (१ 13 1991 १ - २०० 2004) क्लबमा बिताए, २ 296 appea प्रदर्शन गरे र 30० गोल बनाए।
एन्टोनियो कोन्टे तथ्य - इटालियन राष्ट्रिय टीमको लागि प्लेइlay:
यो एन्टोनियो कोन्टेकी आमा हो जसले तत्कालीन इटालियन राष्ट्रिय प्रमुख कोच एरिगो साचीको फोन कलको जवाफ दिए। उनको कल सन् १ 1994 XNUMX F फिफा विश्वकपको लागि एन्टोनियो कोन्टेलाई बोलाउनु थियो जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने थियो।
यद्यपि उनको शुरुवात केही महिना पहिले नै आयो, २ May मे १ 27 1994 on, फर्मल्यान्ड बिरुद्द पर्मामा मैत्रीपूर्ण प्री कप कपको खेलमा।
एन्टोनियो कोन्टे संयुक्त राज्य अमेरिका १ 1994 XNUMX World विश्वकपमा धेरै महत्वपूर्ण थिए। यद्यपि उनको टीम इटाली फाइनलमा ब्राजिलले पराजित भयो। कोन्टेको चोटपटक अझै पनि प्रतिस्पर्धाको शिकार गर्न आयो।
प्रतिस्पर्धामा भाग लिने उनको सपना क्वार्टर फाइनलमा समाप्त भयो जहाँ उनले रुमानियन हागीको हार्ड ट्याकलले दाँतको टखनेको लिगामेन्ट चोट लिनुभयो। यद्यपि उनको इटालियन फाइनलमा फ्रान्सले पराजित गर्‍यो।
कोन्टे पनि बेल्जियम र नेदरल्याण्ड्समा २००० यूरोपीयन च्याम्पियनशिपमा खेले जुन हेड कोच डिनो जोफले बोलाई।
टर्कीको बिरूद्ध पहिलो राउन्ड रोबिन खेलको क्रममा उनले धेरै फुटबल पंडितहरूले 'युरोपियन टूर्नामेन्टको सर्वश्रेष्ठ गोल' भन्ने नाम कमाए। यो साइकल किक गोल थियो। उसको उत्सव अनमोल थियो।
एन्टोनियो Conte वर्ष 2000 मा इटालियन राष्ट्रीय टीम बाट सेवानिवृत्त। उनले6वर्ष आफ्नो देशको लागि खेल्दै बिताए। उनले आफ्नो 20 आवृत्तियों को कुल बनाए र उनको देश को लागि2लक्ष्य बनाए।
एन्टोनियो कोन्टे रिलेशनशिप लाइफ (एन्थोनियो कोन्टे प्रेम कहानी):
जब एन्टोनियो जर्नलसका लागि खेल्न त्रिन गए, उनी भेटिए एलिसेबेटा, आफ्नो छिमेकीको सुन्दर छोरी र मित्र Gianni नाम। उनले तिनलाई हेर्दा निरन्तर समय र उनको साथ कुराकानी गर्ने मौकाको खोजी गर्दै।
विश्वासी दिन, सेप्टेम्बर २०० prec ठीक ठीक, एलिसाबेटा आफ्ना बुबालाई नमस्कार भन्न कोर्सो भिन्जाग्लिओको बारमा आइपुगे र उनले एन्टोनियोलाई भेटिन्, जसले भर्खरको फुटबल खेलाडीले कफीमा गरेको अधिग्रहणको बारेमा टिप्पणी गरिरहेका थिए।
एन्टोनियो र एलिसाबेटाबीचको प्रेम कथा प्रज्वलित हुनु अघि एउटा झलक मात्र चाहिन्छ। यो त्यस्तो समय हो जुन उसले हालै फुटबल व्यवस्थापकको रूपमा काम पायो। तिनीहरूले एक छोरी जन्माउनु अघि धेरै समय लागेन जसलाई उनीहरूले भट्टोरिया कोन्टेको नाम दिए। उनी २०० born मा जन्म भएको थियो।
एन्टोनियो कोन्टेको परिवार (खुशीको एक)
एक्सएनएनएक्सएक्सको जूनको XNumXth मा आउनुभयो जो आफ्नो विवाह मनाउने भन्दा पहिले9वर्षको लागि एन्टोनियो र एलििसबेटा।
एन्टोनियो कोन्टेको विवाहको दिन।
एन्टोनियो कोन्टे एक साँचो परिवार मानिस हो। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले भविष्यको कल्पना गर्ने क्रममा आफ्नी श्रीमती र बच्चा दुवैलाई समाहित गर्दछ।
एन्टोनियो कोन्टे- पारिवारिक मानिस।
ऊ व्याकुलताको सामना कसरी गर्ने भनेर जान्दछ ताकि ऊ आफ्नी प्रिय छोरीसँग गुणात्मक समय बिताउन सक्छ। निस्सन्देह, उसले राम्रो परिवार मूल्य कायम गर्न नेतृत्व लिन्छ।
एन्टोनियो कोन्टे र छोरी (भिट्टोरिया कोन्टे)।
एन्टोनियो कोन्टे बायोग्राफी - उनको भाई सँगसँगै बोक्दै:
जियानलुका कोन्टे एन्टोनियो कोन्टेको कान्छो भाई हुन्। एक पटक, दुबै भाइहरू दुबै युवा खिलाडीहरू थिए उनीहरूको गृह शहर लेसेको। मोरेसो, तिनीहरू सँगै फोगिया विश्वविद्यालय मा अध्ययन।
एन्टोनियो कोन्टेले जहिले पनि आफ्ना भाईलाई साथमा लिएको छ। जियानलुकाले इटाली राष्ट्रिय टोली र चेल्सी एफसी बारी, जुवान्टस, मा आफ्नो भाइसँग एक विश्लेषकको रूपमा काम गरिसकेका छन्। हाल उनी लेखनको क्रममा चेल्सी एफसी सहायक पहिलो-टीम कोचको रूपमा सेवा गर्दछन्।
एन्टोनियो कोन्टे तथ्य - प्रबन्धकीय क्यारियर:
२०११ मा जुभेन्टस आउनु भन्दा पहिले, कोन्टे बारीमा प्रबन्धक थिए। उनी २०० 2011 को अन्त्यतिर बारीमा आए जब मातेराजीले राजीनामा गरे। कोन्टेको राम्रो प्रदर्शनले टीमको पदोन्नति फेरि सेरी एमा ल्यायो।
बारीमा हुँदा कोन्टेले प्रबन्धकीय कर्तव्यहरू र स्कूल शिक्षा दुवैको संयोजन गर्ने निर्णय गरे। मा अक्टोबर 2008। उहाँ मोटर विज्ञानमा पूर्ण सम्मान संग स्नातक गरियो। उहाँले मा विशेष गर्नुभयो "प्रबन्धक मनोविज्ञान"।
नोट: 'प्रबन्धकीय मनोविज्ञान औद्योगिक र संगठनात्मकको उप-अनुशासन हो मनोविज्ञान, जुन व्यक्तियों, समूहहरु र संगठनों को प्रभावकारिता मा केंद्रित छ कार्यस्थल.
यसको उद्देश्य विशेष रूपमा सहयोग गर्नु हो प्रबन्धकहरू कुनै पनि संगठन भित्र व्यक्ति र समूह बीच सामान्य मनोवैज्ञानिक पैटर्न को राम्रो समझ प्राप्त गर्न मा। '
आफ्नो अध्ययनको दौरान, Conte ले खेलकुद मनोविज्ञान (प्रशिक्षक को व्यक्तित्व) मा एक थीसिस लेखे जसलाई उनले सामग्री को विश्लेषण गरे कि एक फुटबल प्रबंधक उनको टीम को आदर्श मालिक बन्यो।
उनी अटलान्टामा 2010 / 2011 सिजनको लागि अल्पविराम भएको थियो। यो उनको चालको पछि लागियो सिएना जो सीरी बी मा आफ्नो प्रारम्भिक प्रबंधकीय नौकरी मा प्रभावित भएको छ, बस सीई बी को प्रत्याशित भएको थियो, उनको सीरीज मा उनको वर्तनी को समयमा प्रचार गरे Serie A को लागि टीम हो।
एन्टोनियो कोन्टे - प्रारम्भिक कोचिंग दिनहरू।
टीमको उत्कृष्ट सिncing्क उनीहरूको सियरा बी सिजनमा देखाइएको थियो। त्यसले उसलाई जुभन्टसमा काम कमायो।
एन्टोनियो कोन्ते २०११ देखि २०१ Ju सीजन जुभेन्टससँग:
एन्टोनियो कोन्टेले जुभेन्टससँग तीनवटा सत्रहरू बिताए। यो तीन सीजनहरू देखी ओल्ड महिलालाई सियरा ए प्रतियोगितामा फर्कायो।
त्यो वफादार मिति, May१ मे २०११, कोन्टेले दुई वर्षको करारमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे जसले उनलाई यस टुरिन क्लबमा June० जून २०१ until सम्म बाध्य पारे। उनको नियुक्ति आधिकारिक बियानकोरो भूमिकामा फिर्ता आएको थियो।
यो भूमिका प्राय: इटालियन फुटबल प्रबन्धकहरूलाई दिइन्छ जसले दुबै आफ्नो टीमको लागि खेलेका छन् र कप्तानको आर्मब्यान्ड लगाएका छन् उनीहरूको टीमको लागि।
कोन्टेले १vent बर्ष जुभेन्टसको लागि खेल्छन् र क्लबको कप्तान आर्म्बान्ड years बर्ष लगाउँदछ। एक पुरानो-स्कूल खेलाडी भएको कारण, नतिजा उसको लागि चाँडो आयो। उसको पहिलो सीजनमा उनीहरूले वास्तवमै सेरी ए च्याम्पियनशिपको उपाधि जितेको देखे।
यो उनको जुभेन्टस एकपटक ठूलोका लागि अविजित रह्यो 38 लगातार खेलहरू, १ 1949 1950 / / १ XNUMX .० को सिजनको अघिल्लो रेकर्ड तोड्दै। जस्तै आर्सेन वेंजरएन्टोनियो कोन्टेसँग एकपटक आफ्नो अजेयताको मौसम छ।
एन्टोनियो कोन्टे जुभन्टस खेलाडीहरू द्वारा फ्याकिदै।
कप्तान तीन सायरी ए शीर्षकहरू तीन वर्षमा जितेकी छिन्। उनले दुई Supercoppa खिताब पनि जीता र उनको तीन तीन वर्षमा सेरी ए कोच लाई पुरानो लेडी संग नामित गर्यो।
एन्टोनियो कोन्टे लाइफ एक राष्ट्रीय टीम प्रबन्धकको रूपमाः
कोन्टे उही राष्ट्रिय टोलीबाट १ retire वर्ष अवकाश पाएको पछि मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा इटालियन राष्ट्रिय टीममा फर्किए। किनभने उहाँ धेरै जनालाई माया गर्नुहुन्थ्यो, कोन्टेलाई इटालियन फुटबल महासंघले दोहोरो भूमिका प्रदान गरेको थियो।
उनले दुबै राष्ट्रिय टोली प्रबन्धक र इटालियन कनिष्ठ टोलीका संयोजकको रूपमा काम गरे। उसको डेबिट नेदरल्यान्ड्सको बिरूद्ध मैत्रीपूर्ण भयो। यो मार्चमा भयो4सेप्टेम्बर 2014 र 2-0 विजयको साथ समाप्त भयो।
एन्टोनियो कोन्टे बायो - पागल गोल समारोह शैली (प्लेयर र प्रबन्धकको रूपमा):
एक खेलाडीको रूपमा, हामी गयौं पागल गोल गर्ने पछि।
एन्टोनियो कोन्टेको पागल गोल समारोह दुबै खेलाडी र कोचको रूपमा।
एक व्यवस्थापकको रूपमा, एन्टोनियो कोन्टेले टेक्निकल क्षेत्रमा वरपर आफ्नो प्यारो टाँग फडफडाउँन शायद त्यहीं छिन। कोचको रूपमा धेरैले उनलाई टचलाइन मनोरन्जनात्मक राजाको रूपमा देख्छन्।
कोन्टेले आफ्नो टेक्निकल स्टाफ र समर्थकहरूसँग बेतरतीबारी मनाउने बानी बसालेको छ। कसै-कसैले उनलाई 'नयाँ माइकल ज्याक्सन' भनेका छन्।
यद्यपि धेरैले उहाँलाई उपनाम- 'द गोडफादर' भनेर बोलाउन मन पराउँछन्। हामी तपाईंलाई एन्टोनियो कोन्टेको केहि क्रेजी गोल समारोहहरूको प्रस्तुत गर्दछौं।
एन्टोनियो जीवनी तथ्य - राफा बेनिटेजको साथ मुद्दा:
कोन्टे साथी-ब्यवस्थापकहरूसँग toe-to-toe सम्म डराउँदैनन्। पूर्व चेल्सी अन्तरिम-बॉसको साथ प row्क्तिमा Rafa Benitez, जोडी जुभेन्टस वा नेपोलीले खेलाडीहरूमा बढी खर्च गरेको थियो कि भन्नेको बारेमा शब्दहरूको युद्धमा संलग्न भयो।
यो Conte ले के भन्छ: “हामीले हाम्रो टोलीमा २ million करोड यूरो लगानी गरेका छौं, उनीहरूले १०० भन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन्। उनीहरूले एक वर्षमा हामीले तीनमा के खर्च गरे, तर ती १ points अ points्क पछाडि र युरोपभन्दा बाहिर छन्।
मानिसहरु लाई आफ्नो तथ्यहरु सही प्राप्त गर्नु पर्छ न कि भ्रमपूर्ण सन्देशहरु फैलाउन। मलाई आशा छ कि बेनिटेजले आफ्नो गणना गणना गर्नेछ। "
महान रणनीतिज्ञ (3-4- 3-XNUMX--XNUMX गठनको व्याख्या गरिएको छ):
कोन्टेको रेकर्डले देखाउँदछ कि ऊ वास्तवमै एक जादुगर हो। कोन्टेले एकपटक ११ खेल खेलेका छन, ११ जितेका थिए, २ goals गोल गरेका थिए, २ गोल बनाए, र आठौं स्थानबाट र place अंकबाट तालिकाको शीर्षमा points पोइन्ट स्पष्ट भयो।
यो अवश्य पनि चेल्सीको रेकर्ड हो किनकि कोन्टे 3-4- .--3 गठनमा परिवर्तन भयो। कोन्टेको मनपर्ने आक्रमणकारी विधि मध्ये एक विस्तृत क्षेत्रहरूमा संयोजनहरूको प्रयोग हो। उसको 3-4- 3-XNUMX--XNUMX गठनको तात्विक विश्लेषण तल वर्णन गरिएको छ।
एन्टोनियो कोन्टे अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य- लोकप्रियता तथ्या :्क:
यो लामो टुक्रा पढ्नको लागि धन्यबाद। सामान्य रूपमा, हामी गहन अनुसन्धान मार्फत पछ्याएको हाम्रो लोकप्रियता तथ्याङ्क संग गहिराइ।